Guddoonka BF Somalia oo kasoo horjeeda “ilaalinta” maamulka maaliyadda - Caasimada Online
Home Maqaalo Guddoonka BF Somalia oo kasoo horjeeda “ilaalinta” maamulka maaliyadda
Guddoonka BF Somalia oo kasoo horjeeda “ilaalinta” maamulka maaliyadda
Jawaab celinta Wasaaradda Maaliyadda Maaliyadda iyo Bankiga Dhexe.A –
Guddoomiye Ku Xigeenka Bankiga Dhexe Drs. Maryam Cabdullahi Yusuf waxay caddeysay in $5 milyan oo ka mid ah $ 20 milyan ee Boqortooyada Sacuudiga ku deeqday 2017 lagu soo wareejiyay Khasnadda Dhese ee DF Bisha 9aad (Setember) 2018, halka $ 15 milyan ay weli ku jirto Xisaab Gaar ah ee Bankiga Dhexe ku qoran. Caddeyntaas waxay rumeyneysaa warbixinta Guddigga. Su’aasha taagan waxay tahay madaama hoos u dhac dakhli jiro, maxaa lacagtaas loogu soo wareejin la’yahay khasnadda dhexe ee dowladda?B – Ilaa hadda, Wasiirka Maaliyadda Dr. Cabdidraxman Ducaale Beyle ma soo bandhigin xog beddeleysa warbixinta Guddiga Maaliyadda ee BFS. Jawaabta laga sugayay waxay aheyd inuu soo bandhigo xisaab xirka 2017 iyo xisaab xirka 8 bilood 2018. Kaddibna qodob qodob uga jawaabo warbixinta.
Wasiirku wuxuu ku dhaqaaqay olole jaahwareerin, dhaleeceyn iyo kicin. Hal ku dhegga Wasiirka wuxuu noqday in warbixinta ay qoreen shakhsiyad, daneystayal (canaasiir) dano gaar ah leh (conflict of Interests). Sidaa darted, warbixintu been abuur tahay asagoo aan wax caddeyn ah bixin. Wasiirku wuxuu is moogeysiyay in Xildhibannanada ay waajib ku tahay inay mashaaric iyo qandaraasyo u raadiyaan deegankooda iyo dadkooda sida uu asaguba ugu raadinayo horumar Gobolka iyo dadka uu matalo. Laanta Fulinta ayaa laga rabaa inay wax qabadkeeda waafajiso sharciga iyo nidaam.
Qoraalka 6da bogga ah ee Wasiirka Maaliyadda ka jeediyay BFS iyo wareysiyo uu siiyay Idaacadaha gudaha iyo dibedda waxaa ka buuxa hanjabaad, cambaareyn, is ammaan, quursi, iyo indho sarcaad. Wasiirku welwel abuuris iyo kicin darted wuxuu ku andacooday in warbixinta Guddiga Maaliyadda ay dalka dhibaatoo gelineyso, lana rabay in asaga laga warqaato, lagu kalsoonaado, lagana dambeeyo. Dhibka dalka ka taagan waa musuqmaasuq, maamulxumo, ku tumashada xorriyada iyo xuquuqda muwaadinka, cadaalad darro, iyo curyaaminta howlaha BFS iyo Hay’adaha Madaxabannan.
Wasiir Beyle waa qaadan waayay in xildhibannada dhalliileen wax qabadkiisa, mana muujin inuu ku qanacsan yahay hadafka qotada dheer ee laga leeyahay xilka ilaalinta (Oversight) BFS ku leeyahay Laanta Fulinta, gaar ahaan Wasaaradda Maaliyadda. La Xisaabtanka dowladda waa howl u baahan sharci u hoggaansanan, aqoon, iyo daahfurnaan dhab ah.
Wasiirku wuxuu sheegtay in shacbigu kalsooni ku qabo, IMF ammaantay, xildhibannada diyaariyay Warbixintana ay muujiyeen biseyl la’aan, iskuna khaldeen dakhli iyo deeq. Wasiirku wuxuu Xildhibannada xusuusiyay in Wasaaradda Maaliyadda iyo asagaba ammaan mudan yihiin. Waa halis in dhirrigelinta siyasadeed ee Hay’adda Lacagta Adduunka (IMF) ula jeedo in dadaalka la kordhiyo loo qaato ammaan wax qabad.
Wasiirku wuxuu ku dooday inaan weli la xirin Xisaabaadka Miisaaniyadda 2018, taaso ah fadeexo weyn, waayo waajibka shaqo waa in maalin iyo bil kasta la sameeyo xisaab xir, hay’adaha shaqada ku lehna lala socodsiiyo. Wasiirku wuxuu qirtay in lacag dhan $3 milyan laga bixiyay Madaxa 105-03 kaddibna lacagtaas dib loogu soo celiyay iyo in lacag tabarucaad ah laga qaaday Shirkadaha Xawaaladaha iyo Bankiyada loona isticmaalay howlgelinta Xarunta Warbixinta Maaliyadda (Financial Reporting Center), asaguna maamulay, taaso ah sharcidarro. Wasiirku ma hubsan in ka Wasiir ahaan ku urursan karin magaca dowladda tabarucaad, kaddibna u isticmaali karin siduu rabo. Dowladdu shaqo kuma laha tabarrucaad (Iskaa wax u qabso) dadweynaha haddii aysan Dowladdu shirka ku aheyn, markaaso loo baahan yahay in nidaam gaar ah loo sameeyo.
Guulaha Wasiirku sheegtay waxaa ka mid ah:
In dhammaan dakhliga dowladda lagu shubo khasnadda dhexe ee Dowladda taaso been noqotay kaddib markii lacag dhan $ 15 milyan doolar ee la helay 2017 aan weli lagu soo wareejin Khasnadda Dhexe ee Dowladda. Tan labaad, Wasiirka ayaa qirtay in malaayin doolar oo deeqbixiyayaasha ay bixiyeen aysan ku soo dhicin Khasnadda Dhexe, madaama aan Dowladda lagu kalsooneyn. Qoraal ka soo baxay khubaro ka shaqeysa Bankiga Adduunka (WB) iyo Qarammada Midoobay (UN) waxay sheegeen in wax ka yar 4% deeqda Beesha Caalamka ku bixiso Soomaaliya la soo marsiiyo Khasnadda Dowladda.
In Dakhliga Gudaha ku talagalka 8 bilood ahaa $ 104 Milyan, lana soo xareeyay $ 112 milyan. Isla Markaa Wasiirku wuxuu sheegay in Kharajka la bixiyay 8 bilood noqday $147 Milyan doolar, taaso muujineysa in loo baahan yahay xisaab xirka Dakhliga Gudaha iyo dibedda si loo qiimeeyo dhaqangelinta Miisaaniyadda.
Wasiirku oo raba inuu beeniyo hoos u dhaca dhabta ah ee dakhliga guud, wuxuu qoraalkiisa ku yiri: “Shakhsiyadkaan ayaa warbixintooda ku tilmaamay in guud ahaan dakhliga dowladda hoos u dhac ku yimid, waxay tilmaameen in canshuuraha shaqaalaha dowladda aanu fadhin hase yeeshe waxaysan eegin isbadalka ma mid koror ah baa mise waa mid hoos u dhac ah, waxaan soo rognay in dhamaan canshuur laga qaato shaqaalaha ka shaqeeya mashaaricda iyo dhamaan gunnooyinka dowladda bixiso sida xeerka uu qabo; ku talagalka canshuurta shaqaalaha ee 8 bilood ayaa ahayd 3.23 milyan doolar halka ay soo xerootay 3.7 milyan doolar, runtii arrintan waa arrin mudan bogaadin.” Farqi ayaa u dhexeya hoos dhac guud iyo hoos u dhac/kor u kac hal Madax. Warbixintu kama hadlin canshuurta shaqaalaha aanu fadhin. Waa tusaale muujinaya is ammaan iyo ka badbadin.
24 Nofember 2018, Wasaaradda Maaliyadda waxay soo saartay Warsaxaafadeed ay ku soo dhoweyneyso go’aanka Barlamaanka Federaalka ku tirtiray warbixintii Guddiga Maaliyadda Barlamaanka ee ku saabsaneyd Maamulxumada Miisaniayadda 2018. Warsaxafadeedku wuxuu sheegayaa sababaha loo tirtiray warbixinta inay yihiin in Miisaaniyadda 2018 weli xirmin, inaan la raacin habraacii Barlamaanka iyo in Wasaaradda Maaliyadda si buuxda u burisay nuxurka Warbixinta. Saddex sababood midkoodna sax ma ahan. Waxaa soo ifbaxaya dhaqan dal iyo dad dhan ku burbureen.